Oceania railway uye cable car news
Thales Anokunda weAustralia Sydney Subway Kuwedzerwa Tender
Thales akakunda thenda yekuwedzera kweSydney Underground kuguta uye kumaodzanyemba, ndokusaina chibvumirano cheCentral Control uye Communications. Ichi chibvumirano chekuwedzera kweSydney Underground's Central Control uye Kutaurirana Systems [More ...]
Melbourne Tram Inoshanda pane Solar Power
Melbourne, guta guru reVictoria, iro rinotarisira kuwedzera iro rinovandudza simba rinotarisirwa ne50 muzana, rinoshanda rese tram network muguta rine simba rezuva. Melbourne ndiro guta rechipiri pakukura muAustralia. [More ...]
MuAustralia, kambani yemigodhi yesimbi, Rio Tinto, yakavhura mota yakazara nechitima ne robhoti huru kwazvo yepasi rese. Railway network yakamiswa mudunhu rePilbara reWestern Australia, nezve 800 [More ...]
MuDevonport, Australia, chiteshi chisina kutakurwa chechitima chakadzika kubva mukutonga, chichitadzisa njodzi inogona kuitika. Sekureva kwemapurisa eTasmanian, husingadzoreki husina kudzorwa chitima chisina kudzorwa kubva muDevonport [More ...]
MuAustralia vakakuvadza kuparara kwechikoro 16
Vapfuuri ve16 vakakuvara apo chitima cheAustralia chiri kusvika pachiteshi cheRichmond kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSydney chakatadza kumira nekupaza vafambi nekurova zvipingamupinyi. State Police yeNew South Wales (NSW) akataura pamusoro penjodzi iyi [More ...]
YeNyika Yekutanga Solar Powered Chitima Yakatangwa
Chitima chepasi rose chekutanga chezuva chakatanga rwendo rwayo kuenda kuAustralia 3 kilomita. Byron Bay Railroad Company yakatanga kushandisa yekutanga nyika ine magetsi ezuva nezuva muAustralia. Yekutanga yenyika [More ...]
Teji Yenyika Yekutanga Yokuenda Pasina Makemikari
Chitima Chemunyika Chekutanga Pasina Mechanic Starts Expeditions: Kambani yekuChina-inochera migodhi Rio Tinto yakatanga kushandisa nyika yekutanga yakazara yakazara nechitima yakazvimirira. Zvimwe kunze kwegodhi remigodhi, iyo kambani [More ...]
1500 City Yakawedzerwa kuMoovit Public Transport Application
Kuwedzerwa kweDayton, Ohio kubva kuUnited States kunoratidza chiitiko chakakosha cheMoovit uye kunoratidza kuti ndiyo yega app yaunoda mukufambisa kupota nyika. [More ...]
Berezi Inobatsira Vana Kuvatora Zuva Rese Kuenda Kuchikoro
Chitima chinobvumira vana kushuvira kuenda kuchikoro mangwanani oga oga: Zvinhu zvinounza mufaro chaiwo zvinowanzouya semugariro wezvinhu zvidiki seizvi. Native Punmu nharaunda inogara muWestern Australia, chitima chinobva kumabhomba [More ...]
29 Munhu Akakuvadzwa MuTram uye Mutori MuAustralia Akakuvadzwa
29 Munhu Akakuvadzwa muAustralia: Tramu nemarori zvinowira vanhu ve29 vakakuvara nekuda kwekukonzeresa kwetangi uye rori muMelbourne, Australia. Tsaona pa8.00 yemuno nguva panguva kuyambuka pedyo neMelbourne Zoo [More ...]
Mukomana Muduku Nenzira Kubva kuPeron
Iye Mudiki Akawira Pakati pechitima nePuratifomu: Muchiteshi chechitima cheSydney Cronulla, mukomana mudiki akawira pakati pechitima nepuratifomu. Chiitiko ichi chakaratidzirwa mumakamera ekuchengetedza zvishoma nezvishoma. Maererano neruzivo rwunowanikwa kubva pachiitiko muAustralia yeSydney [More ...]
Australia, 40 ichakumbira ruregerero nokuda kwenjodzi yekare yeGranville
Australia, 40 kukumbira ruregerero nekuda kwenjodzi yechitima cheGranville gore rapfuura: Iyo State of New South Wales (NSW) ichakumbira ruregerero kumhuri dzakarasikirwa nevadikani vavo mutsaona yechitima cheGranville mushure memakore 40. 18 Ndira 1977 [More ...]
TCDD Inobata Austrian Delegation
TCDD Yakatakura Kupiwa kweAustria: Musangano wakaitwa pakati peA Ankara TCDD nevamiriri vemakambani anoshanda mubazi rezvechitima mu Ankara Gar tower Restaurant Behiç Erkin Hall. Mumiriri weFederal Republic yeAustria kumusangano uyu. [More ...]
Chirongwa Chokutungamirira Kufambisa kuenda kuPerth Airport kuAustralia
Project Yekufambisa Kuwanika kwePerth Airport kuAustralia: Njanji nyowani ichavakwa kuti ibatanidze Forrestfield nePerth Airport mukuzivisa kwakazvarwa neWestern Australia yekufambisa yezvekufambisa. Ita kuti zvive nyore kusvika kune airport [More ...]